Ónyé ǹdú (3/3) | Радоје Домановић
(ibe gara aga)
Otu a ka ụbọchị mbụ gafere, ụbọchị ndị ọzọ sokwa ya nwee otu ihe ịga nke ọma. Ọ dịghị ihe dị oke mkpa mere, ọ bụ naanị ihe ndị na-enweghị isi: ha na-adaba isi na mbụ n’ime olulu, wee banye n’ime olulu mmiri; ha na-agbagharị megide ogige na ohia ogwu; ha zọkwasịrị ụkwụ n’ọhịa ogwu; ọtụtụ gbajiri aka na ụkwụ; ụfọdụ nwere akpu n’isi. Ma ahụhụ niile a diri. A hapụrụ ụfọdụ ndị agadi ka ha tọgbọ n’ụzọ n’anwu. “Ha gaara anwụ ọbụna ma a sị na ha nọrọ n’ụlọ, ghara ikwu n’ụzọ!” ndị ọnụ na-ekwuchitere kwuru, na-agba ndị ọzọ ume ka ha gaa n’ihu. Obere ụmụaka ole na ole, otu afọ ruo afọ abụọ, lakwara n’iyi. Ndị nne na nna kwụsịrị obi mgbu ha n’ihi na ọ bụ uche Chineke. “Na obere ụmụaka, obere iru uju. Mgbe ha dị obere, iru uju na-adị obere. Chineke nyere ndị nne na nna aka ka ha haghi etufu ụmụ ha ma ọlị mgbe ha ruru afọ ịlụ nwanyị. Ọ bụrụ na ụmụaka ahụ kara aka, ọ ka mma na ha anwụọ n’oge. Mgbe ahụ, iru uju adịghị oke ukwuu!” ndị ọnụ na-ekwuchitere ha kasiri ha obi ọzọ. Ụfọdụ ákwà fụchiri afụ n’isi ha na-etinye ntụpọ oyi n’ahụ nsị ha. Ndị ọzọ na-eburu ogwe aka ha na èbè. A na-egbutu ha niile ma bechapụ ha. Uwe ha kwụwara, mana agbanyeghị na ha ji ọganiihu gaa n’ihu. Ihe a niile gaara adị mfe ịnagide ya ma ọ bụrụ na agụụ agụghị ha ọtụtụ ugboro. Ma ha aghaghị ịnọgide na-aga.
Otu ụbọchị, ihe ka mkpa mere.
Onye ndu na-aga n’ihu, ndị nwoke nwere obi ike nọ n’ime ya gbara ya gburugburu. (Abụọ n’ime ha na-efu, ọ nweghịkwa onye maara ebe ha nọ. Ọ bụ echiche ndị mmadụ n’ozuzu ha na ha raara ụzọ ha wee gbalaga. N’otu oge, onye na-ekwuchitere ọnụ kwuru ihe banyere nghọgbu ha na-eme ihere. Ọ bụ naanị mmadụ ole na ole kwenyere na ha abụọ anwụọla n’ụzọ, mana ha ekwupụtaghị echiche ha ka ha ghara ịkpali ndị ọzọ.) Ndị otu ndị ọzọ nọ n’ahịrị n’azụ ha. Na mberede, ọmarịcha nnukwu ogbu mmiri pụtara – ezigbo abis. Mkpọda ya dị oke elu nke na ha agaghị anwa anwa were nzọụkwụ n’ihu. Ọbụnadị ndị nwere obi ike kwụsịrị obere wee lee onye ndu ahụ anya. N’ịhụ ihu, na-echegbubiga onwe ya ókè, o ji nkwuwa gaa n’ihu, na-akụ okpete ya n’ihu, buru ụzọ gaa n’aka nri, mesịa gaa n’aka ekpe, n’ụzọ e ji mara ya. Ọtụtụ kwuru na ihe a niile mere ka o yie ka ọ kwanyeere ugwu ugwu. Ọ hụghị onye ọ bụla ma ọ bụ kwuo ihe ọ bụla. N’iru ya ọ nweghị mgbanwe ngosipụta ma ọ bụ ihe egwu ọ bụla ka ọ na-abịaru nso na nsọtụ. Ọbụnadị ndị nwere obi ike ghọrọ ihe na-achaghị acha ka ọnwụ, mana onweghị onye ọ bụla nwara ịdọ aka ná ntị onye ndu dị ike, maara ihe. Nzọụkwụ abụọ ọzọ ọ nọ na nsọtụ. N’egwu na-enweghị isi na anya mepere emepe, ha niile mara jijiji.
Ndị nwoke nwere obi ike nọ na njedebe ijide onye ndu ahụ, ọbụlagodi na ọ pụtara mmebi nke ịdọ aka ná ntị, mgbe ọ zọruru otu ugboro, ugboro abụọ, wee mikpuo na ndagwurugwu. E nwere mgbagwoju anya, ịkwa ákwá, iti mkpu; egwu meriri. Ụfọdụ malitere ịgbalaga.
– Jidesie ya ike, ụmụnna m! Kedu ihe na-eme ọsọ ọsọ? Ọ bụ otu a ka ị si edobe okwu gị? Anyị ga-eso nwoke a maara ihe n’ihi na ọ ma ihe ọ na-eme. Ọ ga-abụ onye ara iji mebie onwe ya. Gaa n’ihu, n’azụ ya! Nke a bụ nnukwu na ikekwe ihe egwu ikpeazụ, ihe mgbochi ikpeazụ. Onye ma? Ma eleghị anya, n’akụkụ nke ọzọ nke ndagwurugwu a, anyị ga-ahụ ọmarịcha ala na-eme nri nke Chineke zubere maka anyị. Gaa n’ihu! Na-enweghị ịchụ àjà, anyị agaghị ebe ọ bụla! – dị ka ndụmọdụ ọnụ na-ekwuru ya, ya onwe ya kwa were nzọụkwụ abụọ gaa n’ihu, na-apụ n’anya na ndagwurugwu ahụ. Onye nwere obi ike sochiri ma onye ọ bụla ọzọ wee banye.
E nwere ịkwa ákwá, ịsụ ude, ịsụ ngọngọ, ịsụ ude na mkpọda nke nnukwu ọwa a. Mmadụ ga-a nu iyi na ọ nweghị onye ga-apụta ndụ, ma ọ bụrụ na ọ gaghị emerụ ahụ na otu, mana ndụ mmadụ siri ike. Onye ndu ahụ nwere ihu ọma pụrụ iche. Ọ kwụgidere n’ọhịa ka ọ dara ka ọ ghara imerụ ahụ. O jisiri ike dọpụta onwe ya wee rịpụ. Ka ọ na akwa arịrị, na asu ude na ịkwa akwa dara n’okpuru, ọ nọdụrụ ala na enweghị mmegharị, na agbachi nkịtị. Mmadụ ole na ole e tiri ihe na ndị iwe malitere ịkọcha ya mana ọ geghị ntị. Ndị ọ dabara nke ọma nwee ike ijidesi ohia ma ọ bụ osisi ike mgbe ha na-ada ada malitere ịgbalị ike ịgbago. Ụfọdụ gbawara isi ka ọbara na-agbapụta n’ihu ha. Ọ dịghị onye nọ n’otu akụkụ ma e wezụga onye ndu. Ha niile gbakụtara ya azụ ozugbo wee sụọ ude na mgbu mana ọ welighị isi ya elu. Ọ gbachiri nkịtị wee were ọnọdụ nke ezigbo onye amamihe!
Oge gafere. Ọnụ ọgụgụ ndị njem na-ebelata ma na-ebelata. Ụbọchị nke ọ bụla na-ama jijiji. Ụfọdụ hapụrụ ìgwè ahụ wee laghachi.
N’ime ọnụ ọgụgụ buru ibu nke malitere, ọ bụ naanị ihe dị ka iri abụọ fọdụrụ. Ihu ha, ike gwụchara na-egosipụta akara nke obi nkoropụ, obi abụọ, ike ọgwụgwụ na agụụ, mana onweghị onye kwuru ihe ọbụla. Ha dara jụụ dị ka onye isi ha wee na-agagharị. Ọbụna onye na-ekwuchitere mmụọ kpaliri isi ya nke ukwuu. Ụzọ ahụ siri ike n’ezie.
Ọnụ ọgụgụ ha belatara kwa ụbọchị ruo mgbe ọ dị naanị iri. N’ịbụ ndị ihu ha dara mbà, ha na-asụ ude ma na-eme mkpesa kama ịkparịta ụka. Ha dị ka ndị ngwọrọ karịa mmadụ. Ụfọdụ nọ n’ụkwụ. Ụfọdụ jidere aka ha n’èbè kegide n’olu ha. N’aka ha, e nwere ọtụtụ bandeeji na mkpakọ. Ọ bụrụgodị na ha chọrọ ịchụ àjà ọhụrụ, ha agaghị enwe ike n’ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nweghị ebe dị n’ahụ ha maka ọnya ọ bụla. Ọbụnadị ndị kacha sie ike na ndị nwere obi ike n’ime ha enwekwaghị okwukwe na olileanya mana ha ka na-agbasi mbọ ike karị; ya bụ, n’ụzọ ụfọdụ, ha na-agbasi mbọ ike, na-eme mkpesa, na-egbu mgbu. Kedu ihe ọzọ ha nwere ike ime ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịlaghachi? Ọtụtụ àjà na ugbu a ịhapụ njem ahụ?
Chi ojiji gbadara. Ka ha na-agbada na mkpara, ha hụrụ na mberede na onye ndu ahụ anoghị n’ihu ha ọzọ. Nzọụkwụ ọzọ na ha niile dabara na ndagwurugwu ọzọ.
– Ewo, ụkwụ m! Ewo, aka m! – mkpu arịrị na ịsụ ude. Otu olu na-adịghị ike kọchakwara onye ndu ruru eru mana ọ gbachi nkịtị.
Mgbe anyanwụ wara, onye ndu nọdụ ala, otu ihe ahụ n’ụbọchị ahụ mgbe ahọpụtara ya. Enweghị mgbanwe ọbụladị n’ọdịdị ya.
Onye nkwuchite ọnụ ahụ si na ndagwurugwu ahụ pụta, mmadụ abụọ ọzọ sochiri ya. N’ịbụ ndị nwere nkwarụ na ọbara, ha tụgharịrị wee hụ mmadụ ole fọdụrụ, mana ọ bụ naanị ha. Ụjọ ọnwụ na enweghị olileanya jupụtara n’obi ha. Amaghị mpaghara ahụ, ugwu, okwute – enweghị ụzọ ọ bụla. Ụbọchị abụọ tupu ha abịaruo n’okporo ụzọ mana ha hapụrụ ya.
Onye ndú ahu duru ha n’uzo ahu.
Ha chere echiche banyere ọtụtụ ndị enyi na ndị ikwu nwụrụ na njem a dị egwu. Mwute dị ike karịa ihe mgbu nke ụkwụ na nkwarụ ha meriri ha. Ha ji anya ha hụ mbibi nke ha.
Onye na-ekwuchitere ha ga kuru onye ndu wee malite iji olu ike gwụrụ juputara na mgbu, obi nkoropụ na obi ilu kwuo okwu.
– Ebee ka anyị na-aga ugbu a?
Onye ndu ahụ gbachiri nkịtị.
– Ebee ka ị na-akpọga anyị, oleekwa ebe ị kpọtara anyị? Anyị tinyere onwe anyị na ezinụlọ anyị n’aka gị ma anyị esoro gị, na-ahapụ ụlọ anyị na ili nna nna anyị na-enwe olileanya na anyị nwere ike ịzọpụta onwe anyị site na mbibi n’ala ahụ kpọrọ nkụ. E nwere narị ezinụlọ abụọ n’azụ gị ma ugbu a lee ole ha dị!
– Ị pụtara na onye ọ bụla anọghị ebe a? – onye ndú kwuru na nwayo na-enweghị welie isi ya.
– Kedu ka ị ga-esi jụọ ajụjụ dị otu a? Welie anya hụ! Gụo mmadụ ole n’ime anyị fọdụrụ na njem ọjọọ a! Lee ụdị anyị nọ na ya! Ọ ga-akara m mma ịnwụ karịa ka m nwee nkwarụ otu a.
– Enweghị m ike ịhụ gị!
– Gịnị mere?
Mgbachikiti nwuru anwu.
– Ị kwụsịrị ịhụ ụzọ gị n’oge njem?
– Amụrụ m na ìsì!
Mmadụ atọ ahụ kpuchiri isi ha na obi nkoropụ.
Ifufe mgbụsị akwụkwọ na-efegharị n’oké ugwu wee weda akwụkwọ kpọnwụrụ akpọnwụ. Anwụrụ ọkụ na-efegharị n’elu ugwu nta niile, nku ugolo na-efegharịkwa site n’ikuku oyi na-adịghị. Otu mkpọtụ na-adịghị mma dara ụda. Ezochiri anyanwụ n’azụ igwe ojii, nke na-efegharị ma na-aga n’ihu n’ihu.
Mmadụ atọ ahụ lere ibe ha anya n’oké egwu.
– Ebee ka anyị ga-aga ugbu a? – otu onye kwuru na nwayo.
– Anyị amaghị!
Na Belgrade, 1901.
Ознаке:akụkọ ihe mere eme, ala, amamihe, ịda ogbenye, ọbịa, ọdachi, ọdịda, ọgbaghara, ọnya, ụzọ, ihe egwu, mkparita ụka, n'ihu, ndagwurugwu, ngere, nhụjuanya, njem, nkume, nzukọ, obi nkoropụ, ogwu, oké ọkọchị, onye maara ihe, onye mba ọzọ, onye ndú, onye tara ahụhụ